Ikhaya Lam Elitsha | May 2022
Isikhokelo kwelona khaya lifanelekileyo simahla kunye nezixhobo zoyilo lwangaphakathi, iiapps kunye nesoftware yohlaziyo okanye ikhaya elitsha. Bhrawuza awona macebo egumbi anobuhlobo.
Ulinganisa njani amakhethini: Isikhokelo esilula kumlinganiso wamakhethini
Linganisa amakhethini ngokuchanekileyo kwesi sikhokelo silula. Ukunxitywa kweWindows kuzisa isitayile, isimilo kunye nobushushu ekhayeni lakho. Fumanisa ukuba ungayifumana njani okokuqala.
Thenga iSofa Isikhokelo-Iingcebiso ezi-5 zokukhetha isofa esitsha
Ngaba ujonge ukuthenga isofa kwigumbi lakho lokuhlala? Ukukhetha kunye nokuthenga isofa entsha yenye yezona mali zibalulekileyo kwikhaya lakho. Landela esi sikhokelo sokuthenga isofa.
Uluhlu lokuKhangelwa kweNdlu-UkuHlulela uLuhlu lokuKhangela eKhaya
Sebenzisa olu luhlu lokutshekishwa kwendlu kunye nokubalwa kweveki-ngeveki njengesikhokelo sakho sokuya ekhaya, ukusukela oko utyikitye isivumelwano sakho kwaye wavumelana ngomhla wokugqitywa.
Iingcamango zegumbi lokulala elincinci ezi-18 zokuba uthandane-Amagumbi amancinci okuhombisa amagumbi
Xa kuziwa kumagumbi okulala amancinci, kunokuba ngumceli mngeni wokufumana ezona ndlela zokuhombisa kunye nokuhombisa igumbi. Ukusuka kwizipili ezongezelelekileyo ukuya kumbala wokugcina kunye nepeyinti, ezi zezona zilungileyo zokuhombisa kwigumbi lokulala ukunceda ukuba ufumane uninzi lwendawo encinci.
Iingcamango ze-8 Grey Scheme Ideas ezivela kwi-Stylist yangaphakathi-Imibala ehamba neGrey
Ngwevu ngumbala oguquguqukayo kwaye ulapha ukuze uhlale. Ukusuka kumbala ongwevu ukuya kumbala omnyama ongwevu kunye nemibala efana nengwevu nephuzi, nantsi isikhokelo sethu sokuhombisa imibala efanelekileyo ehamba nengwevu.
Iintlobo zePeyinti ezi-6 zichaziwe- iPrimer, Undercoat, Gloss, Emulsion, Clay, Chalk
Ukuhombisa igumbi? Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeepeyinti kodwa landela oku kuchazayo xa kugqitywa ipeyinti kubandakanya i-primer, undercoat, gloss, emulsion, udongwe kunye netshokhwe.
Intsingiselo yokuqeshisa: Yintoni ukuqeshisa?
Ipropathi yokuqeshisa: Isikhokelo sethu ekuthengeni indawo yokuqeshisa iya kukunceda uqonde ukuba kuthetha ukuthini ukuqeshisa, kunye nokwahlula phakathi kwe-freehold kunye ne-leasehold.
Iingcamango ezingama-21 ze-Pantry-Iingcamango zeLarder zeKhabbhodi kwiKishi nganye
Iilarders zasekhitshini okanye ii-pantry zinokuza ngazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Nyusa indawo yakho ngezisombululo zokugcina ezifanelekileyo, ezifanelekileyo ekhitshini elixakekileyo. Bhrawuza iindlela zethu esizithandayo zekhitshi namhlanje.
Uyicwangcisa njani indawo yokuLala kweGumbi lokuPhila
Iyintoni imfihlelo yokucwangcisa indawo yokuhlala efanelekileyo? Njengeyona ndawo iphambili endlini, amagumbi okuhlala aseto lobomi bosapho obuninzi
Into ekungekho mntu ukuxelela yona malunga nokuHamba indlu-Iingcebiso zeNdlu yokuHamba
Fumanisa ukuba ukufezekisa njani ukuphumelela kwendlu ngaphandle kweenyembezi (ewe, zimbalwa) ngeengcebiso zendlu ezihambayo ukusuka ekuhluthweni ukuya kwiibhokisi zokupakisha kunye nokudiliza ifanitshala.
Iingcamango ezili-16 zoYilo lweGadi ngeNdawo yakho yaNgaphandle -Iingcamango eziGqwesileyo zegadi
Landela ezi zimvo zilula zokuyila igadi ukuze uguqule ngaphandle. Ezi zimvo zegadi zibandakanya ukulungiswa komhlaba wegadi, iingcingo, imida, ukuhombisa, ukukhanyisa kunye nokunye.
Iingcamango zeBhari yasekuseni- Amanyathelo ama-6 ukuya kuCwangciso lweBar Breakfast Breakfast
Indawo yokutya kwasekuseni ifumaneka kwisiqithi sasekhitshini, peninsula, okanye njengetafile ezimeleyo kunye neyunithi yezitulo, enikezela ukutya kunye nezisombululo zokugcina.
Izinto ezingama-25 ezinokuchaphazela ixabiso leNdlu yakho
Fumana izinto ezinokongeza okanye zinciphise ixabiso lendlu yakho, usebenzisa uphando oluvela kwiNgcebiso, eneenkcukacha ezintle kunye nexabiso lepropathi.
I-13 yeeNdawo zokuGcina iiPhepha lodonga ukuNceda iiNdonga eziNqabileyo zaseBanner
Ezi zimvo zephepha lodonga lokulala ziya kuphakamisa igumbi lakho lokulala kunye nomlinganiswa kunye nesitayile. Nokuba uya kuyilo olunemigca lodonga olunemigca okanye ipateni edlamkileyo, hlaziya iindonga zakho ezicacileyo ngezi zitayile zahlukileyo.
Amagumbi angama-40 amahle okuhombisa amagumbi okulala -Izimvo zokulala zale mihla
Ngaba ujonge olona luvo luluhle lokulala? Sebenzisa le mibono intle yokulala njengokhuthazo lwesikimu sakho esihle sokuhombisa. Ukusuka kwiindawo ezingcwele ezinqatyisiweyo ukuya kwiindawo eziqaqambileyo nezinqabileyo, jonga iitoni zemifanekiso yokulala enesitayile kwiHouseBeautiful.com/uk.
Iindawo ezigqibeleleyo zokuhlala e-UK 2020 -Iidolophu eziPhambili kunye neziXeko zokuPhila e-UK
Fumanisa eyona ndawo ingcono yokuhlala e-UK kunye neyona dolophu yengingqi kunye nezixeko ukuze uphile ngokusekelwe kwizinto ezininzi kubandakanya uluntu, ukukhutshwa kwe-CO2, ibroadband ephezulu, impilo, ulonwabo, imozulu, ingqesho, inqanaba lolwaphulo-mthetho kunye nemfundo.
Iindawo ezili-10 eziBalaseleyo zokuHlala eLondon 2019-Iindawo eziBalaseleyo zokuHlala eLondon
I-Isle of Dogs ibizwa njengeyona ndawo yokuPhila eLondon kwi-2019 yeCawe yamaXesha eeNdawo aBalaseleyo kwiNdawo yokuPhila. Jonga iindawo eziphezulu ezili-10 eziphambili ze-capital 2019. Abahleli beCawa beCawa bathi ezi ndawo 'kulapho ungonwabela okona kulungileyo kwikomkhulu labantu ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali lukaBillionaire'.
Iimbono ezi-7 zombala wegumbi lokulala- Imibono yePeyinti yokulala
Ngaba ujonge imibala yokulala kodwa ungaqinisekanga ukuba ungaqala phi? Xa kuziwa kwipeyinti yegumbi lokulala, ukusuka ezinzulwini zobusuku kuluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kumbala opinki, khetha imibala eya kulandisa igumbi lakho ukuba libukeke kodwa libe lihle.
Iimbono zangaphambili zegadi-Eyona Ndlela iphambili yoyilo lweGadi yokuBhena
Ukuphucula isibheno sakho sokunqanda ngeyona mibala mihle yoyilo lwekhaya lakho, ekusebenziseni izityalo ezifanelekileyo ekukhetheni imida kunye neengcingo kwindawo yakho yangaphandle.
Isoka elitsha likaChristina el moussa
indawo encinci yokuhlala nezimvo